Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal घट्यो अमेरिकी डलरकाे भाउ, कति छ सटही दर ? | Aafno Khabar
घट्यो अमेरिकी डलरकाे भाउ, कति छ सटही दर ?
२०७८ भाद्र १५ गते १२:०१ प्रकाशित
काठमाडाैं । गत साताको शुक्रबार यता अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर घट्न थालेको छ ।
शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर ११९.०५ रुपैयाँ र खरिद दर ११८.४५ रुपैयाँ थियो । जुन, त्यसयता निरन्तर घट्दै मंगलबार एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर ११७.५२ र खरिद दर ११६.९२ रुपैयाँमा आइपुगेको छ ।
शुक्रबार यता डलरको मूल्यमा १.५३ रुपैयाँको गिरावट आएको हो । यसले नेपाली मुद्रा डलरसामु बलियो बनिरहेको देखाउँछ । भारतीय मुद्रा डलरसामु बलियो बन्दै जाँदा नेपालको मुद्रा पनि बलियो बनेको हो । नेपाल र भारतको मुद्राबीच स्थिर बिनिमयदर रहेको छ ।
मंगलबार एक यूरोको बिक्री दर १३८.६१ र खरिद दर १३७.९० रुपैयाँ तथा एक पाउण्ड स्टर्लिङको बिक्री १६१.६० र खरिद दर १६०.७८ रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै, एक स्वीस फ्रयांकको बिक्री १२८.४५ र खरिद १२७.८० छ भने सिंगापुर डलरको बिक्री ८७.३२ मा हुँदा खरिद ८६.८७ रुपैयाँमा भइरहेको छ ।
यता जापानी १० येनको बिक्री १०.७० र खरिद १०.६४ रुपैयाँमा भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, साउदी रियालको बिक्री ३१.३३ र खरिद ३१.१७ रुपैयाँ, कतारी रियालको बिक्री ३१.८२ र खरिद ३१.३६ रुपैयाँ छ । यसका साथै, आज संयुक्त अरब इमिरेट्सको दिरामको बिक्री दर ३१.९९ कायम हुँदा खरिद दर ३१.८३ रुपैयाँमा भइरहेको छ । बैंकले आज मलेसियन रिंगटको बिक्री २८.२७ र खरिद भाउ २८.१३ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
क्यान इन्फोटेक माघ १८ देखि २३ गतेसम्म हुने
ए डिभिजनमा सातदोबाटोको उपाधि होड यात्रा